I-china Mesh 270G mveliso kunye nabenzi | UShawei
Ikhowudi yomba: LB-F012
Igama: enemingxuma 270g
Umdibaniso: 9X9 500DX500D
Isicelo: udonga lwefestile
Iimpawu + Izibonelelo
Ipholiyesta Scrim / Amandla angaphandle
Ukumisa ngokukhawuleza / Ukuxhathisa kweAras
Ukuxhathisa kwamanzi / ukuChasana neSmudge
Ukugqitywa ngokulula / iGrommet, ukuthunga kunye neHem Stitch
Ukuqina kwangaphandle / ukuLaminetha akufuneki
Imiqondiso ekhanyiswe ngaphambili
Imizobo ye Window
Le mveliso inokubanjelwa i-grommeted yexeshana elifutshane. Ii-grommets zentsimbi kufuneka zifakwe ukungena kwi-2-4 yeelitha zezinto zokonyusa amandla kunye nokuqina. Iteyiphu ephezulu yesibhengezo ephezulu inokusetyenziselwa ukongeza amandla kunye nokomeleza. Ukuthunga izinto ezinokubakho kunokukrola okanye ukucoca. Ukuba ukuthunga kuyanqweneleka, kuyacetyiswa ukuba izinto ziphindwe kabini zithungelwe ngapha nangaphezulu ngeziqu ezibekiweyo nge-intshi. Kucetyiswa iisilitshi zomoya zesiqingatha senyanga kwiibhena ezinenyawo ezili-10 okanye ezinkulu. Ukuqiniswa kwekona, ukufakwa kobungcali kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokufaka ziyacetyiswa ngamandla.
Ukugcina ishelufu yonyaka omnye, gcina izinto kwiqondo lobushushu lama-72 ° F ngokufuma okungama-50%. Vumela imathiriyeli ukuba izinze kwigumbi / iimeko zokuprinta iiyure ezingama-24 ngaphambi kokusetyenziswa.
Iyahambelana ne-Solvent, i-Eco-Solvent, iLatex kunye neeprinta ze-inkjet ezinokunyanga.
Q1: Zeziphi iimveliso zakho eziphambili?
• Sijolise kwizinto zangaphakathi kunye nezangaphandle zokuPapasha izinto, sigxile kuthotho lwe-Adhesive, uthotho lwebhokisi yokuKhanya, uthotho lweeProps zoBoniso kunye nothotho lweWall Wall. I-Brand yethu eyaziwayo ye-MOYU ibonelela nge "PVC yasimahla" yemithombo yeendaba, ububanzi beemitha ezi-5
• Kuxhomekeke kwinto oyicwangcisileyo nakubungakanani. Ngokwesiqhelo, ixesha lokuhamba li-10-25days.
I-Q3: Ngaba ndicela iisampulu?
• Ewe kunjalo.
Q4: Yeyiphi indlela yokuthumela?
Siza kubonelela ngengcebiso elungileyo yokuhambisa iimpahla ngokobungakanani beodolo kunye nedilesi yokuhambisa.
Kwicwecwe elincinci, Siya kuphakamisa ukuba siyithumele nge-DHL, i-UPS okanye enye into enexabiso eliphantsi ukuze ufumane iimveliso ngokukhawuleza kunye nokhuseleko.
Ngomyalelo omkhulu, sinokuyihambisa ngokwezicelo zabaxhasi.
Umbuzo 5. Yeyiphi indlela yakho yokuthumela?
• NguLwandle (kungabizi kwaye kulungele uku-odolwa okukhulu)
• Ngomoya (uyakhawuleza kwaye ulungele iodolo encinci)
• Nge-Express, FedEx, DHL, UPS, TNT, njalo njalo… (umnyango nomnyango wenkonzo)
Egqithileyo BUYEKA UKUPHRINDA ISITIKI SE-PET
Okulandelayo: INGXAKI 270G (3)
I-280G YANGAPHAMBILI YOKUPHINDA IBHAYIBHILE IFILIMU-ECO
I-260G YANGAPHAMBILI EBHATSHIWEYO
I-440G EMNYAMA EMNYAMA FLEX BANNER
I-190G YANGAPHAMBILI UKUPHRINDA I-BACKLIT PET FILM-ECO
I-510G BACKLIT camera IPHOTYI